အမေရိကန် အလုပ်လက်မဲ့ နုံး ဆက်တိုက်ကျဆင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
နိုင်ငံတကာသတင်း ဘာသာပြန်၊ ဇူလိုင် ၅၊ ၂၀၁၄
အမေရိကန်နိုင်ငံ ယခုနစ် June လအတွင်း အလုပ်အကိုင်အသစ် ၂၈၈ ၀၀၀ ဖေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည် ။ အလုပ်လက်မဲ့နုံးကို ၆.၁ % အထိ ကျဆင်းစေနိုင်ခဲ့ပါသည် ။
၂၀၀၈ – ၂၀၀၉ – မဟာစီးပွားရေးကျဆင်းတာ ဖြစ်အပြီး ၄ နစ် လေးလတာကာလ အတွင်း ပျှမ်းမျှ တစ်လလျှင် အလုပ်အကိုင်အသစ် ၂၃၁ ၀၀၀ ( ၂-သိန်း ၃-သောင်း) ဖေါ်ဆောင်ပေးလာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်စီးပွားရေး သမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမေရိကန်နိုင်ငံ Stock market မှ Dow Jones စတော့တန်ဖိုးသည် ၁၇၀၀၀- ကိန်းကို ကျော်လွန်နိုင်သူအဖြစ် သမ္မတအိုဘားမားက သမိုင်းမှတ်တိုင် စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါပြီ ။ ၁၇,၀၆၈.၂၆ အထိ တက်ခဲ့ပါသည် ။
သို့ သော်ဆောက်လု်ပရေး ကဏ္ဍပ်တွင်တော့ အလုပ်အကိုင်အသစ် ၆၀၀၀ သာဖန်တီိးနိုင်ခဲ့ပါသည် ။ သို့ သော် ဆောက်လုပ်ရေး ကဏ္ဍလည်း အလားအလာကောင်းများ ရှိနေကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ချက်များက ပြလာနေပါပြီ ။
လက်ရှိတွင် အလုပ်အကိုင်မရှိသူ အလုပ်လက်မဲ့ ၉ .၄ သန်းရှိနေပါသေးသည် ။
အမေရိကန်စီးပွားရေး ဦးမော့လာလျှင် အာရှစီးပွားရေး က အမေရိကန်အပေါ်အတော်ကလေး တည်မှီနေသည့်အတွက် အာရှဒေသအတွက် နမိတ်ကောင်းများကို စာဖတ်သူများဝမ်းသာဖို့မျှဝေလိုက်ပါသည် ။
4- July Bangkok Post.
One Response to အမေရိကန် အလုပ်လက်မဲ့ နုံး ဆက်တိုက်ကျဆင်း
Catwoman on July 6, 2014 at 12:20 am
I think it can also mean some people stopped looking forajob so they are not in the poll. It s not easy to getajob here and sometimes people can only get night shifts or part time jobs . Some cannot get health ins